Dambiga iyo Difaaca Jiilka Jiilka | Martech Zone
Iyadoo March Madness Macaan Lix iyo toban Ciyaaraha oo socda, Isku-darka waxay u maleynayeen in tani ay tahay waqtigii ugu habboonaa ee looga faa'iideysan lahaa himiladooda shakhsiga 'xiisaha isboortiga. The cusub Isku dar infographic waa wakhti ku habboon oo loo adeegsado macluumaad faa iidaysan oo khafiif ah, haddana waxaan rajeynayaa sarbeebno kubbadda koleyga si loo muujiyo faa iidooyinka ay leedahay otomaatigga dadaalka jiilka saddexaad.
Qodobbada muhiimka ah ee macluumaadka waxaa ka mid ah:
Dembiga Xun - Hawlaha gacanta iyo waqtiyada falcelinta oo gaabis ah
Dambi Weyn - Iskuleylka si loo dhaliyo fursado badan
Difaac Xun - Sii daynta xogta kharribmay
Difaaca Weyn - Joojinta xogta kharriban
Isdhex galka waxay bixisaa xoogaa tirakoob la yaab leh… maahan oo keliya waqtiga keydinta kooxdaada ay sameyn karto, laakiin kororka degdegga ah ee abuurka dalabka ee keena natiijooyinka ganacsiga weyn. Intabadan infographic waxay diirada saaraan nadaafada, dhammeystirka iyo dhaqdhaqaaqa xogta lagama maarmaanka u ah bartilmaameedka wanaagsan oo dhaqsaha leh.
Tags: basketballdifaacadhalinta dalabmarch waalandembi